﻿	Oreo Truffles - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဝက်သား chops ဘယ်အပူချိန်ဖြစ်သင့်သည်
ရိုးရှင်းပေမယ့်အကြိုက်ဆုံးအားရစရာ Oreo Truffles ငါးရုံနဲ့လုပ်ထားတာ (မှန်ကန်ပါတယ်၊ ငါး !) ပါဝင်ပစ္စည်းများ!
မြေသားအမဲသားနှင့်အမျှ mostaccioli ထုတ်လုပ်နည်း
5 ပါဝင်သော Oreo Truffles
ဒီ Oreo Truffles တွေကငါ့အတွက်အပြစ်ရှိတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာလုပ်ဖို့ ၁၀ မိနစ်ခန့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် က ။
ငါ့နှမကဒီ Oreo Truffles ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်နေတယ်၊ ​​မကြာသေးခင်ကအထိသူတို့ဘယ်လောက်မြန်မြန်နဲ့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်နည်းနည်းနဲ့မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကြိုက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာတယ်၊ ၁၀ မိနစ် စားသုံးနိုင်သော cookie ကိုမုန့်စိမ်း !)
သင် Oreo Truffles တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လုပ်သလဲ။
ဤ Oreo ပုဆိန်၏အခြေအမြစ်မှာ ... Oreos (နှင့် cream cheese) ပါ။ ငါအပိုအရသာတစ်ထိရုံအဘို့အ vanilla ထုတ်ယူတဲ့ splash ထည့်ပါ။
သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောချောကလက်အပေါ်မှတ်စုအနည်းငယ် - ဤစာရွက်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ချောကလက်အနည်းငယ်နှင့်ကစားခဲ့သည်။
ငါအရည်ပျော်ချောကလက်ချစ်ပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုအရည်ပျော်ဝင်န့်ကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ချောကလက်ကိုအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးမှာချောကလက်ဖြစ်သည် Ghirardelli အမှတ်တံဆိပ်အရည်ပျော်နံရံ Oreo ၏ခရီးသည်များကိုချောချောမွေ့မွေ့မြန်ဆန်စွာဖုံးအုပ်ထားသော (သူတို့ကစျေးအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ ) သူတို့ကအနည်းဆုံးရှုပ်ထွေးခဲ့ကြသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်သည်။ သို့သော်ဤသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်၏ချောကလက်အရည်ပျော်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအတွက်လည်းသုံးသောအရာဖြစ်သည်။ buckeye စာရွက် (သူတို့လည်းသူတို့ဘယ်လောက်ချောချောမွေ့မွေ့ကြည့်နိုင်သည်) ။
Oreo Truffles ဖန်တီးခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ချောကလက်ထဲမထည့်ခင်မင်းရဲ့ truffles တွေကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိပ်မထားပါနဲ့။
၁၅ မိနစ်အချိန်သည်သင့်တော်သောအချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ Oreo ၏လမ်းကြောင်းများသည်ခိုင်မြဲပြီးအေး။ အေးခဲခြင်းမရှိသောအချိန်၌အေးအေးဆေးဆေးအေးခဲစေသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်အက်ကြောင်းများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ ဒါကြောင့်ခိုင်မာအဖြစ်ချောကလက်၌တည်၏။
ကမ္ဘာ၏အဆုံးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင် Oreo ချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့ချင်လျှင်သတိပြုသင့်သည်မှာသေချာပါသည်။
ပြင်ဆင်ချိန်၂၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၂ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၃၂ မင်္ဂလာပါ စာရေးသူမခင်မာ Oreo Truffles ငါးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ cookie အစအနများနှင့်အဖြူရောင်ချောကလက်အခွံများပါသောချောကလက်များအပြည့်ပါသော! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃၆ Oreo cookies များ
▢၈ အောင်စ ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပျောင်းသည်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
▢၁ ခွက် မှောင်မိုက်ချောကလက်အရည်ပျော် wafers
▢၁ ခွက် အဖြူရောင်ချောကလက်အရည်ပျော် wafers
Oreo ကွတ်ကီးစ်များကိုအစားအစာပရိုဆက်ဆာတွင်ထည့်ပါ။ သူတို့ဒဏ်ငွေအစအနသို့ pulverized ပြီသည်အထိ Pulse ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
ရပ်နားသည့်အရောအနှော (သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ရောနှောသုံးသောပန်းကန်လုံးထဲ) တွင်ချောမွေ့သောဒိန်ခဲကိုချောမွေ့အောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ cookie crumbs ဇွန်း ၂ ခုကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပြီးကျန်ရှိနေသေးသော crumbs များကိုဒိန်ခဲနှင့်ထည့်ပါ။ vanilla ထုတ်ယူထည့်ပြီးကောင်းစွာပေါင်းစပ်သည်အထိပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးနှိုးဆော်။
1 ½ဇွန်းဖြင့် Scoop Oreo အရောအနှောနှင့်ဖယောင်းစက္ကူကပ်ထားသော cookie စာရွက်ပေါ်သို့ထည့်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁၅ မိနစ်ချထားပါ။
သင်၏မှောင်မိုက်သောချောကလက်အရည်ပျော်နေသောပန်းကန်လုံးကိုပန်းကန်လုံးငယ်တစ်ခုနှင့်အခြားအဖြူရောင်ချောကလက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထုပ်ပိုးခြင်းအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်, အရည်ကျိုသည်အထိအပူ။
သင်၏ Oreo ဘောလုံးများကိုရေခဲသေတ္တာမှချကာချောကလက်တွင်နှစ်မြှုပ်ပါ၊ ခြောက်သွေ့သောမှောင်မိုက်သောအမှောင်များနှင့်တစ်ဝက်ကိုအဖြူရောင်ချောကလက်ထဲသို့နှစ်မြှုပ်ပါ။ * ရေခဲမှုတစ်ခုစီကိုနှစ်ပြီးသောအခါချက်ချင်းသီးသန့်ထားသောကွတ်မုန့်များဖြင့်ဖြန်းပါ။
* ကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးသောနည်းမှာ Oreo truffles ကိုချောကလက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ရန်မှာ - ထောပတ်ဓါးသွား၏အကျယ်အပေါ်တွန့်လန့်မှုကိုဟန်ချက်ညီစေရန်၊ ထိပ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ချောကလက်ကိုအညီအမျှထိန်းရန်ဇွန်းကိုသုံးကာနောက်ဓားကို သုံး၍ နောက်သို့ပြန်လှည့်ရန် ဖယောင်းစက္ကူ။
သော့ချက်စာလုံးခရစ်စမတ်၊ ခရစ်စမတ်ကွတ်ကီးများ၊ လွယ်ကူသောခရီးများ၊ အိမ်လုပ်ရေကြောင်းခရီးများ၊ သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
သင်ချစ်ရလိမ့်မည် Oreo ချက်ပြုတ်နည်းများ!
ပူပြင်းချောကလက် Brownie ခွက်